Samsung dia manohy mamoy ny varotra any Shina sy India | Androidsis
Samsung dia tsy nanana tsara 2018. Ny varotra ny orinasa Koreana dia nianjera be ary nahita ny mpifaninana aminy indrindra, indrindra ny Huawei. Amin'izao fotoana izao dia misy tsena roa izay manan-danja amin'ny marika marobe, toa an'i Shina sy India. Tamin'ny faharoa, ny marika Koreana dia nahitana vokatra tena tsara, indrindra amin'ny farany ambony, saingy very ny mpitarika ho an'i Xiaomi.
Saingy toa tsy mandeha amin'ny fotoana tsara indrindra ny fisiany amin'ireo tsena roa ireo. Samsung dia nijanona tsy nahomby tany Sina fotoana lasa izay, izay tsy bestseller ny telefaonin'izy ireo. Saingy amin'ny tranga India, tsena nahitana varotra tsara dia tsy hita intsony izy ireo tamin'ny taona 2018.
Miorina amin'ny vidiny ny indostrian'ny telefaona any India. Noho izany, hitantsika ny fahombiazan'ny marika toa Xiaomi, zavatra iray misy fiatraikany lehibe amin'ny Samsung, izay mahita ny fomba fivarotany eo amin'ny tsena manan-danja lehibe toa izao dia manomboka mihena.
Ireo modely misy vidiny ambany 200 euro no mpivarotra tsara indrindra any India. Mamela ny marika sinoa, toy ny Xiaomi, OPPO na Huawei, ankoatry ny maro hafa, hanana varotra tsara eto amin'ity firenena ity. Raha ny marina, raha ny angona farany azo avy amin'ny firenena, ireo finday dimy be mpividy indrindra ao amin'io firenena io dia ambany noho ny $ 100.
Samsung dia tsy marika manana modely be loatra amin'ny faritra iva misy vidiny ambany. Na dia manana fitaovana miaraka amin'ny Android Go aza izy ireo ho toy ny rafitra fandidiana, ambany ny vidiny. Fa ny ankamaroan'izy ireo maodely dia afovoany sy avo lenta, izay avo loatra ny vidiny ho an'ny tsena toa an'i India.
Mahaliana ny mahita izay hitranga amin'ny taona 2019. Samsung dia manavao tanteraka ireo tandavanany, miaraka amin'ireo maodely vaovao izay mampanantena fa ho zava-baovao kokoa, manomboka amin'ireo vaovao avo lenta miaraka amin'ny Galaxy S10 izay ho tonga amin'ny volana febr telefaona azo ovaina, izay havoaka amin'ity fahavaratra ity. Hanampy anao hanatsara ny varotrao any India ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung dia mbola very tany any Chine sy India
Ahoana ny fananganana ny findainao Android voalohany